Horudhac: Arsenal vs Chelsea… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka adag ee London Derby) – Gool FM
Horudhac: Arsenal vs Chelsea… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka adag ee London Derby)
Haaruun December 29, 2019
(London) 29 Dis 2019. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa soo dhoweyn doonta Chelsea galabta oo Axad ah kulan ka tirsan horyaalka Premier League.
Macallinka Gunners ee Mikel Arteta ayaa kulankiisii ugu horreeyey ee London Derby laylin doona ciyaarta galabta ka dhacaysa garoonka Emirates.
The Blues ayaa u safreysa Arsenal, iyadoo maanka ku haysa in haddii laga adkaado kulankan ay hoos uga soo dhici karto booska afarta sare.
Taariikhda: Axad, 29 Dis 2019
Daafaca kooxda Arsenal ee Calum Chambers ayaa dib ugu soo laabanaya shaxda kaddib markii uu ganaax ku maqnaa kulankii ugu horreeyey ee Boxing Day.
Gabriel Martinelli iyo Hector Bellerin ayaa la qiimeyn doonaa, halka Rob Holding iyo Dani Ceballos ay u badan tahay inay ka maqnaanayaan Gunners kulankan.
Dhinaca kale kooxda Chelsea ayaa la filayaa in dib ugu yeerto Mateo Kovacic kaddib markii la ganaaxay kulankii Boxing Day, iyadoo Mason Mount iyo Christian Pulisic ay sidoo kale diyaar u yihiin inay ku soo laabtaan kulankan.
Reece James iyo Marcos Alonso ayaa seegay kulankii ay guuldarrada kala kulmeen Southampton, iyadoo kan dambe ee Alonso ay u badan tahay inuu taam u noqon doono inuu kulankan ciyaaro.
>- Arsenal ayaa guuleysatay labo ka mid ah saddexdeedii kulan ee ugu dambeeyey Premier League oo ay garoonkeeda kula ciyaartay Chelsea, kulanka kalena waxa uu ku dhammaaday barbaro, waana in ka badan intii ay horey u sameeyeen markaas ka hor 12 kulan ay gurigooda ku soo dhoweeyeen Blues (5 Barbaro iyo 5 Guuldarro).
>- Chelsea ayaa guuldarro 2-0 ah ay ka soo gaartay kooxdaan bishii Janaayo – waligood guuldarro kama aysan soo gaarin kulammo xiriir ah horyaalka ee ay la ciyaareen Arsenal tan iyo bishii October sanadkii 2011-kii, halka markii ugu dambeysay oo kulammo xiriir ah laga badiyo iyagoo marti u ah Gunners ay ahayd bishii October sanadkii 2003, markaasoo ay saddex guuldarro kala kulmeen si xiriir ah.
>- Arsenal ayaa marnaba guuldarreysan kulan Premier League ah iyagoo garoonkooda kula ciyaaraya Chelsea marka ay dhaliyaan goolka hore ee ciyaarta, waxa ay guuleysteen 11 kulan, waxaana ay barbaro galeen afar kulan 15 kulan oo ay goolka hore dhaliyeen Gunners, iyagoo ka horjeeda Blues laguna ciyaarayo Gurigooda sida maanta oo kale.
>- Kooxda Arsenal ayaa guuldarro la kulantay kulankeedii ugu dambeeyey horyaalka ee sanadkii 2018-kii, waxaana 5-1 uga adkaatay Liverpool, weligood khasaaro lama kulmin kulanka ugu dambeeya horyaalka sanado xiriir ah tan iyo 1994/1995 oo ay la kala ciyaareen Kooxaha QPR iyo Wimbledon.
>- Chelsea ayaa laga badiyay kaliya kulankoodii ugu dambeeyay ee horyaalka mid ka mid ah 16-kii sano ee ugu dambeeyay, waxaana ay haystaan 11 Guul iyo 4 Barbaro, halkaas kulanna waxaa Gurigooda ku garaacday kooxda Aston Villa sanadkii 2011-kii, kulan ku dhammaaday 1-3.
Horudhac: Liverpool vs Wolverhampton Wanderers… (Kooxda Reds oo kulankeeda ugu dambeeya sanadka caawa ku ciyaari doonta Anfield)